Space Tatoos: Mapuraneti uye Astronauts | Kunyora
Kusarudzwa kwenzvimbo matattoos: Mapuraneti, vanoongorora muchadenga uye zvakawanda zvekufungidzira
Nat Cherry | | Kufungidzira Tattoos
Wakambomira kuti utarise kudenga husiku pane chero ehusiku hwezhizha? Nguva dzatinomira kuti tifungisise uye tifunge nezve vedu vadiki isu tiri pakati pedenga.
Kusarudzwa kwematatoo atinounza nhasi muTatuantes yakatsaurirwa kune avo vese vanorota avo vakamborota nezvekukwanisa kushanyira dzimwe nyika kana kuti ivo vanongoda zvese zvine chekuita nenzvimbo nenyeredzi. Sarudzo yenzvimbo nyora.
1 Izvo zvinoreva matattoos epakati
2 Space tattoo mazano
2.1 Ruvara tattoo yemuchadenga
2.2 Tattoo nemapuraneti mazhinji
2.3 Mapuraneti ari pabendekete
2.4 Yechokwadi astronaut tattoo
2.5 Space chiitiko tattoo
2.6 Ruvara mapuraneti tattoo pamaoko
2.7 Space opera chiitiko tattoo
2.8 Ecologist Pasi Tattoo
2.9 Space Vapambi tattoo
2.10 Zvikamu zvemwedzi
2.11 Minimalist rocket nyora
2.12 Tattoo pamwe mhumhi uye renyeredzi
2.13 Nyeredzi Hondo Tattoo
3 Mifananidzo ye Space Tattoos
Izvo zvinoreva matattoos epakati
Pakati pavo, isu tichaona mamwe echokwadi mabasa ehunyanzvi uye mune mamwe, akati wandei mashoma mashoma dhizaini kubva kuimba yevamwe vanozivikanwa kwazvo tattoo maartist. Mapuraneti, vanoongorora muchadenga kana zvimisikidzo zvisingaite kuti vatarise ganda redu chidimbu chezuva redu kana nyeredzi dziri kure uye nyika idzo rimwe zuva dzatinogona kushanyira.
Zvinoreva maastrosut matattoos yakasungwa zvakanyanya vanhu vane kudanwa kunoramba kuchivakoka kuti vafungidzire nezvekuenda kunzvimbo yekunze, zvichidaro, vanorota uye kazhinji, vane pfungwa huru yekufungidzira. Ndokunge, vanyori kana maartist vaizopinda muboka iri, kunyanya avo vanowana sainzi ngano imwe yemhando dzavanofarira. Nekudaro, maTatoo akafuridzirwa nebasa rekare senge Ray Bradbury kana na mafirimu senge Alien, zvidimbu zvinogona kuve zvese zvine mavara uye nhema uye chena uye izvo zvinoratidza kuti nzvimbo ndiko kumusha kwekufungidzira.
Kune rimwe divi, tinogona kuwana kumwe kukurudzira kwenyika, kana kusungirirwa kutsika yechiGreek neyechiRoma, tichikurudzirwa zviratidzo zvezodhiac, nyaya dzatinotaurirwa nemapoka enyeredzi kana mapuraneti, imwe neimwe ine chirevo chakakosha.
Uye zvakare, sezvo rudzi urwu rwematato rwakatanga kuve rwakakurumbira, maTattoo mataturu agara akabatanidzwa kune vanhu vanoyemura matenga ekudenga kuti husiku vanotarisa mudenga redu. Tinogona kutaura kuti ivo vanowanzo hukama kune vanhu vanoda sainzi.
Space tattoo mazano
Tichaona izvozvi mashoma mazano ekukuchidzira iwe kune yako inotevera tattoo. Space chinhu chikuru sosi yekurudziro!
Ruvara tattoo yemuchadenga
Semuenzaniso weatraonaut tattoo isu tinayo iyi ine yakanyanya sci-fi maitiro. Kunyangwe isati yapera, zvinogona kuoneka kuti zvine ruvara rwakanyanya, nemamwe mwenje pane sutu yemuchadenga. Kuratidzwa kwenzvimbo iri muheti ngowani inonakidzawo.
Tattoo nemapuraneti mazhinji
Isu zvakare tine uyu muenzaniso wemapuraneti, kwatinoona Pasi, Mars, Jupiter uye Saturn yakakomberedzwa nemaroketi akasiyana siyana, achikurudzira kufamba kwemapuraneti. Icho chaicho chinotonhorera uye chine dhizaini dhizaini.
Mapuraneti ari pabendekete
Heano mumwe muenzaniso weumwe munhu ane nzvimbo yakatemwa neteteti yemapuraneti uye izvo zvinoita sezuva. Bendekete inzvimbo yakakwana yekuwedzera vhoriyamu kune akakomberedza dhizaini senge ino.
Yechokwadi astronaut tattoo
Uye isu tinotevera uyu anotonhoreka muchadenga ari pakati pemusikana uyu. Iyo ine yakasarudzika manyorerwo kupfuura yapfuura imwe, isina zvimwe zvakawanda kupfuura iye aastrononaut pachake. Kunyangwe uine anastrononaut nyora ani anoda rumwe ruzivo.
Space chiitiko tattoo
Kana iwe uchida kusarudza dhizaini hombe, unogona kutora mukana weiyi tema theme kuratidza muenzaniso chiitiko muchadenga. Iyo ndiyo dhizaini inokodzera kuratidza runako rweyeredzi ine mavara uye nekuipa manzwiro neyeastronut, zviputi zvepasi pamoto ... Unogona kukurudzirwa nekufungidzira kwako (kana iko kweako nyora nyora) kana zvichienderana nefirimu senge 2001, odyssey muchadenga.
Ruvara mapuraneti tattoo pamaoko
Asi chimiro chakapesana zvachose neicho chekare chinogona zvakare kuve chinotonhorera. Izvi zvakanaka, zvishoma uye zvine mavara. Pane rimwe ruoko kune zvikamu zvemwedzi uye kune imwe mapuraneti eesolar system. Zvekare, iwe unokwanisa kuzvisimbisa pachokwadi kana kuvakweva paunoda, senge mune ino kesi, uko Saturn iri hombe kupfuura Jupiter.
Space opera chiitiko tattoo
Ngatirege kukanganwa nezvevatorwa, vavakidzani vedu mune zvakasikwa. Chidimbu ichi, chiitiko chekuita neufo, mutorwa ane ziso rimwe uye mutorwa maitiro pin up up muenzaniso wechitaera chisingori chinonwa chete kubva kuicho uye minimalism, asi iwe unogona kuwana inotonhorera kukurudzira mune iyo muchadenga opera uye pulp mabhuku.
Ecologist Pasi Tattoo
Izvo zvakaita izvi zvinoratidza kwatakabva kune zvisikwa kubva kune mamwe magaraxy uye kuti tinodada nazvo. Kunze kwekuratidza rudo rwedu kupasi, isu zvakare inokurudzira rudo rwemiti uye zvirimwa uye nharaunda, chimwe chinhu chinofanira kushandiswa nevanhu vazhinji.
Space Vapambi tattoo
Vhidhiyo mitambo se Space Vanopinda zvakare inopa yakawanda kutamba (regerera iyo redundancy) yeakareruka uye madhijitari dhizaini. Iyo pikicha yekudhirowa inoita kuti zvive nyore kwazvo kutora tattoo uye inoshanda zvakanyanya mushe mukungwara dhizaini.
Uye tingakanganwa sei kuti imwe yemitumbi yekudenga iri padyo nesu (kunze kwePasi, hongu), semwedzi. Yedu setiraiti inoshanda zvishamiso pamhando dzese dzematatoo: hombe uye ndeyechokwadi, wega, mune yepasi kana roketi, ine zvikamu muzvidimbu zvidiki zvakasiyana ...
Minimalist rocket nyora
Pamusoro pezviitiko zvinoorora. nzvimbo inoshandawo zvakaringana mune mashoma mashoma magadzirirwo. Zvichida kusarudza muviri wekudenga wega kana zvimiro zvidiki senge iri pamufananidzo, mune roketi iri kunanga kumwedzi, hunyengeri huri mumitsetse yakanaka uye uchishandisa mavara akakodzera, ayo anogona kuapa kubata kwehupenyu.
Tattoo pamwe mhumhi uye renyeredzi
Mune ino imwe nyora yepasi mhumhi uye boka renyeredzi zvakawedzerwa kuti zvipe kubata kwakanyanya. Iwe unozowana dhizaini yakasarudzika kana ukawedzera mhuka yako yaunofarira kana boka renyeredzi (kana izvo zvinotsanangudza iwe zvakanyanya).
Nyeredzi Hondo Tattoo
Uye pakupedzisira, kana tikataura nezvezvipengaidzo zvepasi, iyo Nyeredzi Yekufa kubva kuStar Wars haigone kupotsa. Iyo dhizaini inoshanda kwazvo pachayo pachayo uye inogona kunyatsomutsa chiitiko chekare umo Obi Wan, nehungwaru hwake hwese, anoti "Haisi mwedzi."
Sezvawaona pfungwa dzinogona kudhonzwa kubva muchadenga hadziperi, kubva kune vanoongorora muchadenga vachitsvaga ruzivo munharaunda dzepasi rose kuenda kumapuraneti ari kure achipfuura nemumaroketi, mwedzi uye zviitiko zvebucolic kupfuura Orion… Tiri kutoronga nyora yedu inotevera mushure meiyi positi. Tisiyere ako mazano, fungidziro uye mibvunzo munzvimbo yemashoko.
Mifananidzo ye Space Tattoos
Kunobva - Tumblr
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Kusarudzwa kwenzvimbo matattoos: Mapuraneti, vanoongorora muchadenga uye zvakawanda zvekufungidzira
Iwo akanakisa matatoo madiki evarume
Madehenya eMexico: zvinoreva kuzvitema nyora uye dhizaini mazano